Isigwaca esisuka sikholwa yizagila kolwezindlu KwaZulu-Natal - Bayede News
Isigwaca esisuka sikholwa yizagila kolwezindlu KwaZulu-Natal
Ukukhula kwedemokhrasi kulingana nezinkinga ezisemaqenjini
Oshicilelweni lwelaboHlanga lwamhla zingamashumi amabili nesishiyagalolunye kuMfumfu kungihlabe umxhwele ukuvuma koMnyango Wezokuhlaliswa Kwabantu kweleNdlovukazi uMthaniya ukuthi basukuma ngoba sekubhekwe okhethweni ukusebenza. Bezisholo bona ngomlomo waloyo osekhaleni lalo Mnyango uMhlonishwa uJomo Sibiya.
Sikhuluma nje le nqola ayishayelayo uSotobe iyanyinyitheka umthwalo wokwakhela abantu izindlu njengoba kunabantu asebaze bendela koyisemkhulu belinde ukwakhelwa zona izindlu.
Lena ngenye yezinqola okunezinsolo zenkohlakalo njengoba okumele bahlomule bekhihla esikaNandi nsuku zaphuma emisakazweni, kumaphephandaba, komabonnakude, nakwezokuxhumana bekhala ngokulinda iminyaka belinde izindlu abasohlwini lokuzithola.
Laba abakhalayo kokunye bakhomba ngenjumbane aboMnyango wakhe uSotobe behlangene namakomiti abhekelele intuthuko emiphakathini bethi bazinika abasondelene nabo umniniyo asale ebambe udonga.
Uma ngingabuza nje ukuthi njengoba umhlonishwa ezosivezela ubufakazi bokuthi bayizikhwishikhwishi, pho kwenzeke kanjani ukuthi agxumele izindlu ezakhiwe manje nje njengoba lezi zindlu engizibona lapha ikakhulukazi ezaseBrooks Farm besezakhiwa ngoNtulikazi wakulo nyaka kutatshwa nje ziyaqedelwa?
Kubantu asebehlale kolindela ngaphezu kweshumi leminyaka bude buduze nalezindu abebezivula lapha, bona kwenzeke kanjani uSotobe noMnyango wakhe babagwebe ngokubahlalisa isikhathi eside kangaka bengafakwa ezindlini ingoba noma azikakhiwa ezabo sebehlale ngaphezu kweminyaka elishumi? Ngingemangale njengoba umhlonishwa encoma igagasi lokuhlaliswa kwabantu ukuthi nomnyango kaNdosi nawo ungalibika lelo gagasi njengoba mawungaya laphaya esiteshini samaphoyisa eMtshebheni uzothola amadokodo amacala avulwe ngabantu okudayiswe izindlu zabo.
Lokhu okwenziwe nguSotobe lapha kungacishe kuhumusheke ngokuthi ufela ngamathe umsebenzi owaqalwa ngozakwabo abelamile yena njengoba ezoshicilela umsebenzi wamanje.
Engicabanga ukuthi ukuba ebeqonde ukukhombisa izwe ukuthi uMnyango Wezokuhlaliswa Kwabantu kwelikaMthaniya uphezu komkhono bekumele ngabe waqala mhlawumbe ngoNcwaba ukushicilela lomsebenzi kusukela kuqala ngohlelo lweRDP kuze kuzofika manje. Kodwa uqome ukuzosiqinisekisa ukuthi abahuqi buthongo ngalezi ezakhiwe manje engingasho ngithi bekuyindlela yokugaya ivoti nanjengoba ezofaka isikhangiso sekusele izinsuku ezintathu kuvotwe noma mhlawumbe usazohlehla nyova uSotobe asikhombise nezakhiwe ngaphambi kwalezi uma ezishaya isifuba ngesimo sazo.
Isenzangakhona: Isidinga iSADC eyaKwaNgwane
Sethembe ukuthi uMnyango Wezokuhlaliswa Kwabantu njengoba esho uSotobe uzoqhubeka nangale kokhetho usebenze engingazi ke noma bazoqhubeka nokusikhombisa asebezakhile noma bazoqhubeka nokuzakha. Kodwa ke asethembe ukuthi bazoqhubeka nokwakha zonke zibe sezingeni lokuhlala abantu, hhayi lezo abazothi bengena abanikazi uyibone isimbozwa ngoseyili uma kufika imvula.
Singathokoza singabeNguni uma uSotobe kungathi lapho ayohlaba khona isoyi ukusuka manje enze isiqiniseko ehlangene nonjiniyela ukuthi ayisiphindi le nhlamba yokufakelwa amapayipi okuzothi uma lina amahlandla ambalwa efakiwe ngakho kodwa, sibone sekugijima indle engwaqeni ngoba uzovumelana nami uSotobe ukuthi lokho akwenzeki kwezinye izindawo.
Kuqashelwe nokuthi kungakhiwa phezu kwenhlabathi egugulekayo okuthi makufika izimvula ezinkulu kudingeke lowo mndeni ulandwe emfuleni. Nakho ke ukuthi kungabanjwa izindlu bengafakwa abantu kulindwe ukuthi kusondele ukhetho baze bahujwe ngezagila ngamaqembu aphikisayo kube ikhona besuswa yizagila.
nguZanele Buthelezi Nov 19, 2021